Loza nandritra ny pantekoty :: Olona roa no namoy ny ainy, sivy ambin’ny folo naiditra hopitaly • AoRaha
Loza nandritra ny pantekoty Olona roa no namoy ny ainy, sivy ambin’ny folo naiditra hopitaly
Olona roa no fantatra fa namoy ny ainy nandritra ny alahady sy alatsinain’ny Pantekoty lasa teo, raha ny tatitra voaray avy amin’ny
hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), Ampefiloha . Tsy voamarina mazava no antony nahatafaty ny iray, izay tonga tao amin’ny hopitaly, ny sabotsy lasa teo, raha vokatry ny fisotroana kosa no nahafaty ny iray hafa, omaly. Fantatra fa roa izy ireo no niaraka nisotro toaka ka nentina tao amin’ny sampana fameloman’aina saingy avotra kosa ilay namany.
Ankoatra ireo namoy ny ainy, voalaza fa olona sivy ambin’ny folo hafa no tsy maintsy naiditra hopitaly nandritra ireo roa andro ireo hatramin’ny omaly tamin’ny roa ora tolakandro. Efatra ambin’ny folo no niditra hopitaly ny sabotsy ary dimy kosa ho an’ny alatsinainy.
Ankoatra izay, olona enina amby roapolo amby zato hafa ihany koa no fantatra fa tsy maintsy nandalo tao amin’ny Hjra nanao fizaham-pahasalamana.
“Tamin’ireo efatra ambin’ ny folo naiditra hopitaly, ny sabotsy, dia nisy vokatry ny lozam-pifamoivoizana, nisy efatra kosa vokatry adiady ary ny telo hafa dia loza tany an-trano no nahazo azy. Noho ny fisotroana kosa ny nampidirana hopitaly ny olona roa hafa .
Ho an’ireo tsy maintsy niditra trano famelomana aina nandritra ireo roa andro ireo dia nisy olona telo nikasa hamono tena saingy avotra soa aman-tsara ny ainy. Nisy ihany koa ireo voan’ny fahapoizinana ara-tsakafo”, hoy ny profesora Olivat Rakoto Alson Aimée, talen’ny hopitaly Hjra, omaly.
Fanaparitahana fitaovam-piadiana :: Lehilahy nivarotra bala nogadraina eny Tsiafahy